त्यसै मारिएका हैनन् दुर्गा तिवारी, दोष ‘डन’को कि युवा संघको पनि ? - Dainik Nepal
त्यसै मारिएका हैनन् दुर्गा तिवारी, दोष ‘डन’को कि युवा संघको पनि ?
सिद्धिचरण भटराई २०७३ पुष १५ गते १२:२०
पुस ४ गते दिउँसो खैरेनी चोक नजिकै कमरेड दुर्गा तिवारीको हत्या भएपछि राष्ट्रिय अखण्डता र प्रदेश नं ५ विभाजन सम्वन्धी आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ । आन्दोलनकारीका मागमा थप केही माग थपिएका छन । ति हुन: १) क. दुर्गा तिवारीको हत्याको छानवीन र हत्यारालाई कानुनको कठघरामा ल्याउने । २) क. दुर्गा तिवारीलाई शहिद घोषणा गर्ने र ३) नागरिकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै रुपन्देही र देवदहलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने । यी मागहरुका पक्षमा प्रदेश नम्बर ५ को विभाजनको षडयन्त्रबिरुद्धको आन्दोलनले जसरी जनअनुमोदन प्राप्त गर्यो त्यसरी नै जनताबाट यी मागलाई प्रदर्शनहरुबाटै सर्वस्वीकार्य बनाइएको छ । अब त्यसलाई संस्थागत रुपमा कार्यन्वयन गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । मुख्य कुरा यही हो । हत्या गरिएका दुर्गा तिवारी युवा संघ नेपाल रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले रुपन्देही क्षेत्र नं १ निवर्तमान क्षेत्रीय सचिवालय सदस्य थिए । यो बाहेक उनी केवीआई इटा उद्योगका सञ्चालक र विभिन्न युवा क्लवका अध्यक्ष र युवा अभियानका प्रेरक समेत थिए । तर आज म यहाँ केही महत्वपूर्ण सन्दर्भहरु मार्फत अपराध र समाज,अपराध र राजनीति, अपराध र अर्थशास्त्र बारे केही प्रश्नहरु उठाउन चाहन्छु ।
अपराध र समाज:
समाजकै आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्थाकै कारण अपराधको जन्म हुन्छ र अपराधीहरु निर्माण हुन्छन । पहिलो कुरा यसलाई स्वीकारेर मात्र यसप्रति सही दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ । जुन वातावरणले माछा पानीमा रहन सक्छ, बाँच्न सक्छ, त्यसरी नै अपराधी पनि समाजकै अवस्थाका कारण समाजमा बाँच्दछ । यस हिसावले हामीले देवदहको समाज कस्तो बनाएका छौं ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ । हुन त अनुसन्धानले पुष्टि गर्न बाँकी नै छ । तर अपराधको एतिहासिक पृष्ठभुमि र अपराधलाई विभिन्न मिडियामार्फत स्वीकारेको सन्दर्भलाई स्वीकार्दा हामि यो निष्कर्षमा पुग्दछौँ कि दुर्गा हत्यासंग जोडिएका व्यक्ति मनोज पुन हुन । उनी देवदहवासी हुन । यस भन्दा अघिको घटनासँग जोडिएका शालिकराम चापागाई लगायत पनि देवदहकै हुन । शालिक चापागाई र मनोज पुन जन्माउने हुर्काउने र मलजल गर्ने यहाँको समाज, राजनीति र आर्थिक व्यवसायमाथि प्रश्न गरेनौं भने हामीले यो वेलामा स्व. दुर्गाको हत्याको वेलामा खाएको सपथ देखावटी मात्र हुनेछ । शालिकराम चापागाई, दुर्गा तिवारीमाथि गोली हान्ने प्रयास लगायतका आरोपमा केही महिना अघि पक्राउ परिसकेका छन् ।
‘डन’हरुलाई युवा संघमा भित्राउन पर्छ र सुधार्नुपर्छ भन्ने नाममा केही अपराधी मनोबृतिका मानिसहरुलाई संगठनमा ०६८ मा स्पेस दिइयो । यसवेला युवा संघमा आवद्ध भई मनोज पुन क्षेत्रिय कोषाध्यक्ष र सालिकराम चापागाई क्षेत्रिय सदस्य भएको साँचो कुरा हो । उनीहरु संगठनमा भित्रिएपछि नै त्यसले तत्कालै नकारात्मक नतिजा निकाल्न थाल्यो । हिजो एमालेको युथ फोर्समा संरक्षण लिन चाहने अपराधीहरु आज कस्को संरक्षणमा एमालेका अगुवामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन ?
अपराध र राजनीति :
अपराध र राजनीतिका बारेमा खासगरी यो क्षेत्रका अपराध र व्यवसाय र राजनीतिका हलचललाई उजागर गर्ने गरी २०६९ सालमा नेपाल भुमीहिन सुकुम्वासी संगठनले प्रकाशित गरेको लालपुर्जा देउ पुस्तकको पेज नम्बर २२ को वर्ग संघर्ष, केही कथा र बाँकी प्रश्नहरु नामक लेखमा सविस्तार लेखेको छु । केही प्रतिनिधि घटनालाई कथा नाम दिएर यथार्थ प्रस्तुत छ । यसमा थप्नु पर्ने मेरो कुरा के हो भने अपराधीलाई राजनीतिक बचाउ गर्ने काम हाम्रो सामाजिक राजनीतिक धरातलले नै काम गरेको छ । यसैकारणले दुर्गा तिवारीको सम्म यो विस्तार भएको छ । जमिन्दार गंगा लक्ष्मी मल्लले माओवादी जनयुद्वकालमा हदबन्दी बढीको जग्गा सरकारका नाममा लगतकट्टा गरि राखेको देवदह ३ टटेराको ९ विगाह बढी सरकारी जग्गा हालका एक माओवादी केन्द्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिको योजनामा मनोज पुन र शालिकराम चापागाईकै संलग्नातामा बेची खाएका थिए । यसरी सरकारी जग्गा गुण्डाहरुले वेचिखाने कुरा अत्यन्त गलत र गैरकानुनी ठहर गर्दै संगठनले बिरोध गरेको थियो । संगठनको विरोधले उनीहरु फरार भएका थिए ।
लेखकः सिद्धिचरण भटराई
राजनीतिको पनि अर्थशास्त्र छ । अहिले सजिलो गरी आयआर्जन गर्ने इजिमनी कमाउने तरिकाको फैलावट छ । उत्पादनमुखि पुँजी निर्माण खुम्चिएको छ । मेहनत गरेर कमाउने भन्दा पनि तस्करी, कमिसनखोरी, दलाली जस्ता आयआर्जनका तरिकाहरुतर्फ मानिसको जर्बजस्त आकर्षण छ । यी कुरालाई अनुकुल बनाउन अपराध अपरीहार्य रुपमा उपस्थित हुन्छ । अपराधीहरु यसैको जगमा उम्रिन्छन, हुर्कन्छन र मानिसको हत्याजस्तै फौजदारी अपराध समेत गर्दछन् ।
देवदहमा अपराधका कारखाना भनेका पहिले काठ तस्करी थियो, अहिले लागुऔषध कारोबार, जमिन्दारका लुकाइएका जमिन, कथित जनमुक्ति सेनाको कोटा पुर्याउन भर्ना गरिएका र पछि शान्ति प्रक्रियामा विस्थापित भएका युवाहरु, गिटीबालुवा र ठेक्कापट्टाको जबरजस्ती कब्जा हुन । हो हामीले भूमिहिन सुकुम्वासी संगठनबाट समाज र राजनीतिको यो विकृत पक्षमाथि २०६९ असार १८ गते धाबा बोल्यौ । डनहरुलाई युवा संघमा भित्राउन पर्छ र सुधार्नुपर्छ भन्ने नाममा केही अपराधी मनोबृतिका मानिसहरुलाई संगठनमा ०६८ मा स्पेस दिइयो । यसवेला युवा संघमा आवद्ध भई मनोज पुन क्षेत्रिय कोषाध्यक्ष र सालिकराम चापागाई क्षेत्रिय सदस्य भएको साँचो कुरा हो । उनीहरु संगठनमा भित्रिएपछि नै त्यसले तत्कालै नकारात्मक नतिजा निकाल्न थाल्यो । हामीले केही महिना पछि नै उनिहरुलाई युवा संघको संगठनबाट निस्कासित गर्यौ । अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिनुहुदैन भन्ने खरो पक्षधर दुर्गा तिवारी हुनुहुन्यो, यही कारण उहाँको दबाब र प्रयासबाटै निष्कासित अपराधि प्रबृतिका व्यक्तिको निशाना बन्न थाल्नु भयो । खैरेनी चोकमा गोली काण्ड, युवा संघकै कार्यकर्ताहरुलाई खुकुरी प्रहार, सुनवल परासीका गोपी पुनमाथिको दिनदहाडै खकुरी प्रहार, स्वयम् दुर्गा तिवारीमाथि गत ०७२ फागुन ६ गते गोली हानेर हत्या गर्ने असफल प्रयास भयो । यसका पछाडि र मनोज पुन र शालिक चापागाईको हात रहेको कुरा पुष्टि भइसकेको बिषय हो । हिजो एमालेको युथ फोर्समा संरक्षण लिन चाहने अपराधीहरु आज कस्को संरक्षणमा एमालेका अगुवामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन ? खोजीको बिषय र अनुसन्धानको बिषय यो हो ।
अपराध र अर्थशास्त्रः
समाज व्यवस्था अनुसारका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु स्वाभाविक होलान् । समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय हिसाबले अपराधको अनुसन्धान भए जस्तै अर्थशास्त्रीय हिसावले पनि यो अपराधका सैद्धान्तिक विवेचना हुन्छन् र छन् । व्यवसाय र लेनदेन वा विनिमय सम्वन्धहरु भित्रबाट अपराधको पक्ष उद्घाटित हुन्छ मलाई यस्तो लाग्छ । यससंग हाम्रो न्याय प्रणाली र सामाजिक न्याय निर्माणका हाम्रा कतिपय प्रयासका अस्पष्टता र कमजोरी पनि आउलान अन्तरसम्बिन्धत भएर तर बैधानिक व्यवसाय भित्रैबाट गरिने अवैधानिक कमाईले पनि अपराधलाई मलजल गरेका छन । जिविसको रोयल्टी ठेक्का, चल्ला आयात, भन्सार, काठ, जग्गा दलाली, किनवेच र मोलतोलमा जबरजस्ती वा मिलेमतो यी सबैमा कुनै न कुनै किसिमले अपराध जोडिएर आएको छ । हामीले राज्यका निकायलाई कस्तो गरी चलाएका छौँ ? प्रहरी प्रशासन र सरकारी सुसाशनका पक्षहरुलाई कसरी हेरेका छौं ? उसले कसरी काम गरेको छ सत्तामा रहँदा वा नरहँदा ? आज उद्यम गरेर खाने भन्दा अपराध गरेर कमाउनेहरु किन सुरक्षित छन ? उद्योग र कलकारखानाबाट अरुलाई रोजगारी दिएर कमाएका स्वाभिमानि उद्यमी भन्दा तस्कर र दलालहरु सबैभन्दा सुरक्षित छन् किन ? तिवारीको हत्याले राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन आर्थिक जगत पनि तरंगित छ । भैरहवामा उद्यमी न्यौपानेमाथि भएको आक्रमण प्रयास पनि यसैको एउटा पक्ष हो ।
तिवारी हत्याबाट स्वाभिमानी उद्यमी र युवा आन्दोलनको अगुवाको हत्या गरेर ‘इजी मनी’ कमाउनेहरुलाई तर्साएर पैसा असुल्न जबरस्जस्त मनोविज्ञान स्थापित गरिएको छ समाजमा । सजिलै अब फोनका भरमा धम्काएर करोडौ असुल्ने वातावरण बनाइएको हुनसक्छ । विभिन्न उद्यमीहरु र व्यापारीहरुलाई धम्की आएको सुनिन्छ सायद यसैको परिणाम हो ।
सरकार माथि प्रश्न:
अपराध घरभित्रै पनि हुन सक्छ । नेपाली समाजमा मानिस घरभित्रै पनि असुरक्षित छ कतिपय अर्थमा । काम, कर्म र सम्वेग, मन बुद्धि र विवेक, ज्ञानको सन्तुलित प्रयोग नहुँदा, आत्म संयम गुमाउँदा हुने अपराध भिन्न हुन तर संगठित रुपमा गरिएको अपराध सोझै सरकारसंग जोडिएको सुरक्षा प्रश्न हो । तिवारी हत्याकाण्ड संगठित अपराधका कारण भएको हो । आकस्मिक रिसइबी होइन । यसको जालो विशाल छ भन्ने कुरा करिब करिब स्पष्ट छ । हत्या दुर्गालाई गोली हान्ने प्रयास गर्ने ६ महिना अगाडि पक्राउ परेका मानिसहरु र त्यो घटनाका योजनाकार फेला नपर्नुको कारण पनि हुन सक्छ । या मधेसतर्फ चलेको स्वतन्त्र मधेस नामको अपराधिक शक्ति पनि हुन सक्छ । दुर्गा असुरक्षित छ भन्ने कुरा यहाँको प्रहरी प्रशासनको उच्च तहसम्म थाहा थियो । आखिर किन यो थाहा हुँदाहुँदै उहाँको ज्यान गयो रु यो प्रश्नको जिम्मेवार र चित्त बुझदो जवाफ चाहन्छ नागरिक समाज सरकारबाट । अपराधीले चेतावनी दिएरै हत्या गरेको छ, राज्य र सुरक्षा निकाय टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको देखिन्छ । नागरिकहरुले यो अवस्था कतिदिन सहने र ?
दुर्गाको हत्यापछि युवा साहित्यकार स्वतन्त्र नेपालले एउटा स्टाटस लेखे- “हामी मर्न लायक नभएर बाँचेकाहरु हौं”। अर्थात स्वाभिमानका साथ उभिएर मर्न लायक दुर्गा हुनुुहन्थ्यो । अझ भनौ अपराधीसँग सम्झौता नगरेकै कारण उहाँ मारिनुभयो । अपराधीलाई युवा राजनीतिमा प्रशय नदिएकै कारण उहाँ मारिनुभयो । उद्यमशिल भएर बाँच्नुपर्छ, ठगी खाने भएर होइन भन्ने शिक्षा दिन खोजेकै कारण मारिनुभयो । राष्ट्रियताका पक्षमा र प्रदेश विभाजनबिरुद्धको जनहितकारी आन्दोलनका पक्षमा मोर्चा नछोडी उभिएकै कारण मारिनुभयो । मलाई गोली हान्ने प्रयास गरियो मेरो जिउज्यानको सुरक्षा गर भनेर सरकारलाई र सुरक्षा अंगलाई ६ महिनादेखि निरन्तर भनेकै कारण मारिनु भयो । म फेरि पनि भन्छु उहाँले राज्यका सुरक्षा अंगलाई भरोसा गरेकै कारण मारिनुभयो । त्यो भन्दा बढी उहाँ आफ्नो पार्टीप्रति निष्ठा र भरोसा राखेकै कारण मारिनुभयो । यसलाई पुष्टि गर्ने देवदहवासी जनतासंग हजार तर्क छन् । तसर्थ उहाँ हाम्रो देशको शहिद हो । युवासंघको प्रकाशपुञ्ज हो र एउटा नक्षत्र हो । दुर्गाको जीवन आफ्ना लागि मात्र बाँचेको जीवन रहेन, ऊ अरुका लागि बाँच्यो, बाँचुञ्जेल, स्वाभिमानका साथ बाँच्यो । आफूमात्र वाँचेको भए उ बारम्बार अपराधीसंग सम्झौता गर्दै ऊ जीवनभर मरिरहन्थ्यो शायद । तर, उसले त्यो मृत्यु रोजेन । बोटबाट आफै झर्ने पात झरेजस्तो होइन्, हिमाल स्वयम् ढले जस्तो मृत्युवरण गर्यो । उ घरको मात्र मान्छे भएन आज देशको मान्छे भएर मर्यो । यसैले लाल सलाम दुर्गा भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली !
(लेखक: नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देहीका सदस्य हुन् )